Arbeloa: Hadii uusan Mourinho ahayn ilaa iyo maanta Guardiola ayaa koobab la qaadi lahaa Barcelona balse lama siin mudnaan ku filan – Gool FM
Arbeloa: Hadii uusan Mourinho ahayn ilaa iyo maanta Guardiola ayaa koobab la qaadi lahaa Barcelona balse lama siin mudnaan ku filan
(Madrid) 26 Maajo 2016. Alvaro Arbeloa waxa uu aaminsan yahay in Jose Mourinho uusan waligii helin mudnaantii uu Real Madrid uga qalmay marka la eego juhdigii uu bixiyey.
Arbeloa waxa uu qeyb ka ahaa dhinicii Madrid ee Mourinho, kuwaas oo jabiyey awoodii Barcelona saddexddii sano ee uu maamulayey kooxda ka dhisan caasimada isaga oo ku hogaamiyey hanashada La Liga xilli ciyaareedkii 2011-12.
Madrid waxa ay la loolameysa Barcelona-nadii Pep Guardiola oo laa aqoon saaa in ay ahayd kooxdii ugu awooda badneyd ee kubadda cagta ebid, laakiin waxa ay 100 dhibcood uga qaadeen horyaalka iyaga oo dhaliyey 121 gool.
Laakiin Arbeloa waxa uu qabaa in Mourinho, kaas oo u qaaday Madrid Copa del Rey ololihii 2010-11, in uusan helin mudnaan ku filan marka la eego guushii uu ku gaaray Real sanadihii uu joogay.
“Mourinho aad ayuu muhiim ugu ahaa bur burinta quwadii Catalans,” sidaas waxaa wareysi uu siiyey beIN Sport ku sheegay Arbeloa.
“Lama siin mudnaan ku filan, hadii uusan imaan lahayn, Pep Guardiola ayaa ilaa iyo hada koobab ku sii qaadi lahaa Barcelona.”
Arbeloa waxaa lagu wadaa in uu ciyaaro kulanka finaalaha Champions League ee ay Atletico Madrid la leeyihiin.
33 jirka waxa uu xusay tababaraha haatan talada Madrid haya Zinedine Zidane, isaga oo yiri: “Waxa uu haystaa xushmadeena, ka helideena iyo muxubadeena.”
Leonardo Bonucci oo niyad jabiyay Chelsea: Waxaan ku faraxsanahay joogitaanka Juventus"